छोम्रोङमा १८ औं ल्होसार मेला, पुरुष भलिबलमा अन्नपूर्ण यूथ क्लब विजयी • Pokhara News by Ganthan
प्रकाशित ११ पुष २०७६, शुक्रबार १५:५५
पोखरा, ११ पुस /कास्कीको अन्नपूर्ण गाँउपालिका–११, छोम्रोङमा सञ्चालित १८ औं ल्होसार मेला–२०७६ सकिएको छ । सेञ्चुरी यूवा क्लब छोम्रोङ, घान्द्रुकको आयोजनामा सञ्चालित मेला पुस ५ बाट सुरु भई ९ गते बुधबार समापन भएको हो ।
मेला समापन समारोहका प्रमुख अतिथि युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगत बिश्वकर्माले खेलको माध्यमबाट आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि ठूलो सघाउ पुगेको बताउनु भयो । उहाँले खेलकुदका माध्यमबाट देशको अर्थत्रन्त्रमा टेवा पुर्याउन साहसिक तथा पर्यटकिय खेल गन्तब्यको पहिचान गरी आवश्यक पूर्वाधार निमार्ण र उच्व धरातलिय खेलकुद प्रशिक्षण केन्द्र स्थापनाको कार्य शुरु भएको बताउनु भयो ।
सेञ्चुरी यूवा क्लबले निमार्ण गर्न लागेको टेनिस कोर्टको लागि रु १५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको समेत बताउनुभयो । ५ दिनसम्म सञ्चालन भएको मेलामा खुल्ला पुरुष तथा बास्केटबल प्रतियोगिता सम्पन्न भएका छन् । खुल्ला पुरुष भलिबल प्रतियोगितातर्फ अन्नपूर्ण यूथ क्लब घान्द्रुक विजयी भएको छ । बुधबार भएको फाइनल खेलमा अन्नपूर्णले चण्डी युवा क्लब दाङसिङलाई ३–१ को प्रतिस्पर्धात्मक सेटमा हराएको हो ।
अन्नपूर्णले २५–२२, १७–२५, २५–२१ र २५–२० को सेटमा चण्डीलार्ई पाखा लगायो । पुरुष भलिबलमा अन्नपूर्णका आकाश घमाल उत्कृष्ट खेलाडी घोषित भए । विजेताले ८० हजार रुपैया“ र उपविजेताले ५० हजार रुपैया“ सहित मेडल ट्रफी र प्रमाण पत्र प्राप्त गरेका छन् । प्रतियोगितामा कास्की र पर्वतका १२ टिमको सहभागिता रहेको थियो ।
खुुल्ला पुरुष बास्केटबल प्रतियोगितामा ताङतिङ यूवा क्लब विजयी भएको छ । ताङतिङले उल्लेरी भुमी युवा क्लबलाई बुधवार नै सम्पन्न भएको फाइनल खेलमा पराजित गरेको हो । निर्धारित समयमा ताङतिङले ६८ स्कोर जोड्दा उल्लेरी भुमीले ४६ मात्रै बनाउन सक्यो । प्रतियोगितामा ताङतिङका प्रविण उत्कृष्ट खेलाडी घोषित भए भने हाई स्कोरमा उल्लेरीका मनोज सफल भए ।
विजेताले ८० हजार रुपैया र उपविजेताले ५० हजार रुपैया सहित मेडल ट्रफी र प्रमाण पत्र प्राप्त गरेका छन् । प्रतियोगितामा कास्की र पर्वत १० टिम सहभागी थिए । क्लबका अध्यक्ष मिकास गुरुङको अध्यक्षतामा सम्पन्न समापन समारोहमा विजयी टिमलाई प्रमुख अतिथि यूवा तथा खेलकुद मन्त्री जगत बिश्वकर्मा, अन्नपूर्ण गाँउपालिका कास्की, वडा नं. ११ का वडाध्यक्ष हिम गुरुङ क्लबका अध्यक्ष मिकास गुरुङ, सल्लाहाकार दिलिप गुरुङ, मेला संयोजक राजकुमार गुरुङ लगाएतले पुरस्कार वितरण गरिएको थियो ।
पश्चिमाञ्चल क्षेत्रिय अस्पतालमा कोरोना परीक्षण सगँ हुदाँ अन्य विरामी त्रसित ११ पुष २०७६, शुक्रबार १५:५५
बिदेश भएका नेपालीका सम्बन्धमा एकपटक सोच्ने कि ? ११ पुष २०७६, शुक्रबार १५:५५
पोखराका ३ नेपालीलाई भारतले अष्ट्रेलियाबाट दिल्ली ल्यायो ११ पुष २०७६, शुक्रबार १५:५५
थप ७७ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, ६८२ पुग्यो, थप १ जनाको मृत्यु ११ पुष २०७६, शुक्रबार १५:५५
पोखराका नागरिक अभियन्ताको एमसीसी खारेजी माग ११ पुष २०७६, शुक्रबार १५:५५
आहत परिवारलाई राहत बाँड्दै श्रेष्ठ र थापा ११ पुष २०७६, शुक्रबार १५:५५
पोखरामा काम गर्दा गर्दै ढलेपछि मृत्यु ११ पुष २०७६, शुक्रबार १५:५५
थप ७२ जनामा कोरोना, संक्रमित ६७५ पुगे ११ पुष २०७६, शुक्रबार १५:५५
पोखरामा कोरोना संक्रमितको शव व्यवस्थापन तालिम( यस्तो छ कार्यविधि) ११ पुष २०७६, शुक्रबार १५:५५
श्रेष्ठलाई प्रेस युनियन अवार्ड ११ पुष २०७६, शुक्रबार १५:५५